Mowliidka: "Nabi Muxammad NNKH isaga ayaa billaabay inuu xuso dhalashadiisa".
Tuesday October 19, 2021 - 22:16:20 in Wararka by Mogadishu Times
Sanad walba bisha Rabiicul-Awal waxaa inta badan dalalka muslimiinta ee sunniga ah laga xusaa dhalashada Nabi Muxammad Nabadgalyo iyo Naxariis Korkiisa Ha ahaatee, inkastoo ay jiraan dad kale oo kasoo horjeeda fikirkaas.Magaalooyinka Soomaalida, oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo la xiriira dabaaldagga maalintii uu dhashay Rasuulka.
Marar badan hoggaamiyeyaasha dariiqada Suufiyada waxay aad u xoojiyaan in xuska dhalashada nabiga NNKH uu yahay mid muhiim ah, ayna sax tahay in maalintaas la weyneeyo.
Laakiin culimada Salafiyiinta oo ah dadka doodda ka qaba arrintaas waxay ku tilmaameen ficil "bidco” ah oo aan waafaqsaneyn diinta Islaamka.
Maxay tahay Sababta ugu weyn ee loo xuso dhalashada Nabiga?
"Rasuul wuu soomay, dadka muslimiinta ahna wuu faray inay soomaan. Xadiiskaas waxaa laga faa’iideysnaayaa, sida uu Xaafid Ibnu Xajar ku leeyahay Kitaabkiisa Al Fatxul Baari, in la sameynayo ficil shukriga ku tusinaya oo Alle looga mahad celinayo nimco la isku galladeystay,” ayuu yiri.
Sheekh Xuseen ayaa intaas ku daray in Rasuul NNKH "dabaaldaggiisa lasii billaabay isagoo dhalanin, oo lagu sheegay kitaabadii ka horreeyay ee Towraad iyo Injiil”.
Daliil kale ayuu sheegay inuu yahay markii nabiga la weydiiyay mid ka mid ah maalmihii uu soomi jiray oo Isniin ah, "taasoo uu ku jawaabay inay tahay maadaama ay tahay maalintii la dhalay oo uu xusayo”.
Waxa uu intaas ku daray in Muslimiinta laga doonayo inay dabaaldagaan bisha Mowliidka, "maadaama ay tahay bil uu Alle Adduunka siiyay hadiyad aan wax la mid ah jirin, oo ah dhalashada Nabiga, nabadgalyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Aqoonyahankan ayaa ku taliyay in si loo xuso dhashada rasuulka la sameeyo dhowr waxyaabood oo kala ah:
In la isu imaado si loo muujiyo mucjisooyinka Nabiga iyo in sunnadiisa la raaco
In la booqdo bukaannada ku jira isbitaallada
In lacag la sadaqeysto
In dadka la quudiyo
Culimada ayaa ka digay in xuska laga ilaaliyo isdhexgalka ragga iyo dumarka iyo xumaatooyinka kale.
Ka sokoow xusaska Moowliidka ee ka dhacaya Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ayaa maalin fasax qaran ka dhigtay maalinta moowliidka, iyada oo xitaa dowlad goboleedyada qaar ay sidoo kale fasaxeen shaqaalaha rayidka ah. Waxaa ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland oo soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay in maainta Moowliidka awgiis loo fasaxay shaqaalaha.